Ebumnuche Brain Na-agagharị na ụbụrụ mmadụ | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ụdị Ihe Mgbochi
Ihe ndị na-adịghị mma
Ọ bụrụ na a mụrụ anyị na ntụziaka ntụziaka na ihe na-eme ka anyị kwenye! Ozi ọma ahụ bụ, ọ dịbeghị oge ị ga-amụta. Ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya, ma dịka ụgbọ ala, anyị ekwesịghị ịma ihe niile banyere engine iji mụta otú ị ga-esi na-ebuga ya n'enweghị nsogbu.
Igwe foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet adịghị ka porn nke gara aga. Ọ na-emetụta ụbụrụ n'ụzọ dị nnọọ nro. Vidio abụọ dị na mbụ kọwara otú. Ha na-ewepụ ikpe ọmụma ahụ site n'ịkọwa otú ụbụrụ nwere ike isi gbasaa, karịsịa ụbụrụ nwa, bụ ịme ntụrụndụ nke ntụrụndụ a na-akpali akpali nke na-emetụta gburugburu ebe obibi na ọdịbendị anyị.
Okwu TED nke 4 a na-akpọ "Ihe Omume nke Guys"Site na prọfesọ Stanford, bụ Philip Zimbardo, na-ele agụụ mmekọahụ anya ọjọọ.
"Nnwale Ahụhụ Ukwu ahụ”Bụ okwu TEDx nke 16 nke onye nkụzi sayensị mbụ Gary Wilson kwuru, nke na-aza ihe ịma aka nke Zimbardo setịpụrụ. Ele ya anya karịa 11.7 nde ugboro na YouTube ma sụgharịa ya n'asụsụ 18.
Gary emelitere okwu TEDx na ogologo ngosi (1 hr 10 mins) akpọ “Brain gị na Porn - Olee otú Intaneti si emetụta ụbụrụ gị“. Maka ndị na-ahọrọ akwụkwọ na-akụzi ihe na nke mmụta, lee nke Gary Brain gị na Porn: Internet Pornography na Science Emerging of Addiction dị na mpempe akwụkwọ, na ọdịyo ma ọ bụ na Kindle. Ntughari ohuru a gunyere ngalaba na World Health Organisation ohuru ohuru nke International Classification of Diseases (ICD-11) nke na-enye nchoputa ohuru nke 'Nsogbu Ọjọọ Mmebi' maka oge mbụ.
Kedu ihe dị iche na obi ụtọ na anụrị na gịnị kpatara o ji dị mkpa? Lee ihe a magburu onwe video akpọ “Egwuregwu Ndị Na-ahụ Maka Mkpụrụ Obi America: Sayensị na-esite n'aka Njikwa Ụlọ Ọrụ nke anyị na Brain”Nke dọkịta na-agwọ ọrịa bụ́ Dr. Robert Lustig dere iji chọpụta ihe kpatara ya. (32 mins 42 nkeji)
N'akụkụ a 'ụbụrụ isi' Thegwọ Ọrụ takesgwọ na-akpọrọ gị ịgagharị na ụbụrụ mmadụ. Hasbụrụ amalitewo inyere anyị aka na-adị ndụ ma na-eme nke ọma. N'iji ihe dịka 1.3kg (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3lbs), ụbụrụ mmadụ na-eme naanị 2% nke arọ ahụ, mana ọ na-eji ihe dịka 20% nke ike ya.
Iji ghọta otú ụbụrụ si malite ịrụ ọrụ n'ozuzu ya, lee mmalite evolushọn nke ụbụrụ. Ọzọ anyị ga-ahụ otu akụkụ ahụ si arụkọ ọrụ ọnụ site na ịgagharị ụkpụrụ nke neuroplasticity, nke ahụ bụ otú anyị si amụta ma na-agụghị àgwà dị iche iche gụnyere ịmepụta ahụ riri ahụ. Anyị ga-ahụkwa otú ụbụrụ si agwa mmadụ mmasị, ịhụnanya na mmekọahụ site na isi ya neurochemicals. Iji ghọta ihe kpatara eji akwali anyị ụgwọ ọrụ a, ọ dị mkpa ịmara maka usoro nkwụghachi ụgwọ. Gịnị mere afọ ntorobịa nke oge uto ji maa jijiji, ọchị na mgbagwoju anya? Chọpụta ihe gbasara ụbụrụ nwa.